बुटवलबाट काठमाडौं आउंदै गर्दा भारत्तोलनका बिश्व बिजेता रुप कार्कीको निधन – live 60media
बुटवलबाट काठमाडौं आउंदै गर्दा भारत्तोलनका बिश्व बिजेता रुप कार्कीको निधन
भारत्तोलनका स्वर्णपदक बिजेता रुप कार्कीको निधन भएको छ । नेपालको रुपन्देही स्थायी घर भएका कार्कीको बुटवलबाट काठमाण्डौ उपचारका लागि आउंदै गर्दा बीच बाटोमै निधन भएको हो । बुटवलमा उपचार असम्भव भएपछि काठमाण्डौ ल्याउँदै गर्दा बीच बाटोमा निधन भएको श्रोतले बताएको छ ।
← युवतीले स्त’न कसरी आकर्षक बनाउने ? जान्नुहोस तरिका
रबि लामिछाने न्यूज २४ छोडेपछि खाए आमाको क’सम ! औला उठाउनु परे जहाँ भेटिनछु त्यहि ढुंङ्गाले हान्नुस →